Jereo ny morontsiraka nudist tsara indrindra any Almería | Vaovao momba ny dia
Morontsiraka Nudist Almería izay tokony hotsidihinao
Susana Garcia | | Almeria, tora-pasika
Almería dia toeram-pivarotana fahavaratra nandritra ny am-polony taona maro ary eny amin'ny morony dia ahitantsika ny morontsiraka tsara indrindra eran'i Espana. Tsy mahagaga raha eo amin'izy ireo dia misy morontsiraka miboridana izay ankafizin'ny mpitsidika. Manana morontsiraka 250 kilometatra izy ary nandritra ny taona vitsivitsy dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra ho an'ny naturista izy io, tsy any Espana ihany fa eran'i Eropa rehetra. Nudism dia avy any Alemana ary nijanona teny amoron'ny morontsiraka antsika, izay lasa zavatra voajanahary ankehitriny, hany ka misy morontsiraka manokana ho azy.
Andao hiresaka ny sasany amin'ireo morontsiraka nudist tsara indrindra izay hita any Almería. Raha te-hanomboka amin'ny tontolon'ny fitenenan-tena ianao dia afaka mitsidika ny sasany amin'ireo paradisa ireo izay faritra be fasika izay ahafahanao mifalifaly sy milentika masoandro. Aza adino ny mankafy an'io traikefa io eo amin'ny morontsirak'i Almería.
1 Morontsiraka Vera
2 Beach amn'ny Maty
3 Morontsiraka Genuceses
5 Morontsiraka Barronal
6 Lead Cove
Raha mankany isika miresaka momba ny fahamendrehana any Almería tsy misy isalasalana fa mila miresaka momba ny Vera Beach ianao. Amin'ny morontsiraka maro dia avela hanao nudism na mampiasa akanjo ba, fa amin'ny hafa dia avela hanao naturisme fotsiny satria natokana ho azy irery izy ireo. Ny morontsiraka Vera dia iray amin'ireo morontsiraka naturista izay tsy avela ny fampiasana akanjo milomano, ka izany no nahatonga azy ho iray amin'ireo toerana notsidihina indrindra amin'ny fitanjahana. Raha ny tena izy, eo akaikin'ny moron-dranomasina dia misy tanàn-dehibe miboridana izay ahafahan'ny mponina miaina fiainana ara-dalàna tanteraka ivelan'ny moron-dranomasina eo am-panaovana asa fitenenana. Kilometatra iray kilometatra ity morontsiraka ity ary amin'ity faritra ity no ahitantsika ny hotely naturista tokana any Espana, ny Vera Playa Club.
Beach amn'ny Maty
Ity morontsiraka ity Any amin'ny Valan-javaboahary Cabo de Gata no misy azy ary io dia iray amin'ireo malaza indrindra any Almería. Any amin'ny tanànan'i Carboneros amin'ny halaviran-dàlana iray, satria ny morontsiraka 1600 metatra dia eo afovoan'ny faritra voajanahary, amin'ny toerana tena tsara tarehy toa tsy misy fotony. Misy lalana maromaro mankany amin'ny morontsiraka fa raha mankany isika dia tsy maintsy mandeha an-tongotra, noho izany dia ampirisihina tsy hitondra zavatra be loatra. Tsy atolotra ho an'ny olona kely fivezivezena izy io fa azo antoka fa mendrika ny dia. Izy io dia morontsiraka ahafahanao manao nudism fa koa ny fanatanjahan-tena toy ny snorkeling noho ny rano mangarahara.
Ity dia iray amin'ireo morontsiraka izay ao amin'ny valan-javaboary voajanahary ary fantatry ny mpizahatany manerantany. Any amin'ny helodrano no misy azy ary miaraka amina fasika volamena tsara izay manome endrika endrika tsara tarehy, satria misy faritra misy dongon-kely. Any avaratra dia misy ala kely hipetrahana amin'ny masoandro, ka mahatonga azy io ho morontsiraka mety handany ny tontolo andro. Ankoatr'izay dia milamina ny ranony. Izy io dia manana toerana somary avo toerana ary mahazatra ny olona ny mahita manao nudism eraky ny morontsiraka, na dia tsy mandatory aza izany ary mazàna dia any avaratra no misy azy.
Fantatra tsara ity morontsiraka ity ao amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika 'Indiana Jones', fa io koa dia iray amin'ireo faritra feno fasika indrindra eto Almería izay ahafahanao manao nudism ihany koa. 400 metatra monja ny halavany, noho izany dia feno olona amin'ny vanim-potoana avo. Misongadina izy noho ny fananganana vatolampy nisy volkano niandohany sy ho an'ny faritry ny dongona goavambe.
Avy eo amoron-dranomasina Mónsul dia afaka mitsidika ny torapasika Barronal manamorona ny morontsiraka ianao. Avy amin'ny faritra atsinanana dia handehandeha amin'ny morontsiraka isika mandra-pahatongantsika any amin'ny lava-boaloboka Barronal ary avy eo ny morontsiraka. Ity faritra fasika ity dia avo roa heny noho ny velaran'i Mónsul ary moron-dranomaso malaza. Mora ny fidirana aminy ary anisan'ny torapasika malaza indrindra izy mora ny mitsidika azy. Fantatra amin'ny fitenenana miboridana kokoa noho ny hafa toa an'i Mónsul na Los Genovees raha sanatria ka mitady toerana misy atmosfera miboridana kokoa isika.
Ho an'ireo izay mitady toerana malina kokoa hanaovana nudism ary angamba tsy dia malaza loatra toa ny morontsiraka hafa i Cala del Plomo. Cove kely eo anelanelan'ny faritra be vato sy lavitra ny mponina. Roa metatra monja ny halavany, ka tsy manome habaka betsaka ho antsika izy io, saingy voahodidin'ny volokano volkano volkano, izay manome azy ireo tsiambaratelo izay tsy ananan'ny hafa. Etsy ankilany, morontsiraka tsara tarehy misy fasika volamena sy rano mangatsiaka tsy hita noanoa manasa anao hisitrika sy hilomano mandritra ny ora maro. Avy amin'ity cove ity no ahafahantsika miditra amin'ireo akaiky hafa toa an'i Cala de En Medio, izay ahafahanao manao nudism koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Morontsiraka Nudist Almería izay tokony hotsidihinao
Karazana fizahantany any Espana